श्रीमानका भाइजति सबै लोग्ने ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
श्रीमानका भाइजति सबै लोग्ने !
प्रकाशित मिति : माघ ३, २०७३ सोमबार
नेपालको हुम्ला जिल्लामा श्रीमानका सबै भाइलाई लोग्ने मान्नुपर्ने कुसंस्कार कायमै छ । ‘बहुपतिप्रथा’ भनिने यो महिलाविरोधी ज्यादती रोक्न सरकारको तर्फबाट कुनै प्रयत्न भएको देखिन्न ।
गाउँमा बहुपतिप्रथा सामान्य मानिए पनि हुम्ला सदरमुकाममा भने त्यो चर्चाको विषय बन्छ । त्यही लाजले याङजुङ क्याम्पस पढ्न छाडेर गाउँमा बस्न थालेकी छिन् । पहिलो सन्तान जन्माएपछि सिमकोट फर्केर होटल चलाउने योजना छ उनको ।
बहुपतिप्रथा स्वीकार गर्ने याङजुङ एक्ली पढालेखा युवती होइनन् । बाहिरी दुनियाँले अनौठो मान्ने परम्परा हुम्लाका लामा समुदायमा भने सामान्य छ, त्यसैले अझै कायम छ । बहुपतिप्रथामा दाइले जसको सिउँदोमा टाँसी (चैाँरीको घ्यू) लगाएर बिहे गर्छन्, भाइहरूले उनैलाई श्रीमती स्वीकार गर्नुपर्छ । बहुपति बिहेको आफ्नै संस्कार हुन्छ । तर, अरू समुदायबीच धेरै चर्चा हुन थालेपछि पहिलेजस्तो धुमधामसँग विवाह हुन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ । ‘पढेलेखेकाहरू सुटुक्क स्वीकार गर्छन् । लाज मान्छन्,’ बरगाउँ गाविसका पूर्वअध्यक्ष पदम लामा भन्छन्, ‘सकेसम्म बहुपति स्वीकारेको हल्ला सदरमुकाम नपुगोस् भन्ने ठान्छन् ।’
शिक्षित युवती बहुपतिप्रथा रुचाउँदैनन् । तर, धेरैले परम्परा धान्ने र घर भाँडिन नदिने भन्दै त्यही नरुचाएको विवाह स्वीकार गरेका छन् ।
२२ वर्षीया छिरिङ जाङ्मु लामा बहुपति विवाह आफ्नो जातिको संस्कार भए पनि स्वीकार नगर्ने बताउँछिन् । ‘महिलालाई धेरै भार हुन्छ । घरको काम, धेरै भाइहरूको यौनतृष्णा मेटाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छिन् । उनी लामा महिलामा पाठेघरको समस्या हुनुको एउटा कारण बहुपतिप्रथालाई ठान्छिन् । प्लस टु पढ्दै गरेकी लामा अहिले स्थानीय गैरसरकारी संस्थामा सामाजिक परिचालक छिन् ।
बहुपतिप्रथामा विद्रोहको सुरुवात ५० को दशकको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको मानिन्छ । ०४८ सालको निर्वाचनमा हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद छक्कबहादुर लामाले ०५० सालतिर प्रेमविवाह गरे । पाँच भाइकी एक्ली श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै एकल श्रीमती भित्र्याएका उनी एकैसाथ विवाद र चर्चामा तानिए । ‘बिहे गरेर पढ्न गए । घरकी श्रीमती भाइहरूसँगै छिन्,’ समाजशास्त्रीसमेत रहेका लामा भन्छन्, ‘म घुमिरहनुपर्ने मान्छे । बायोलोजिकल निडले पनि अर्को बिहे गर्नुपर्ने भयो ।’ कान्छा भाइले पनि विद्रोह गरेर एकल बिहे गरे । त्यसयता हुम्लामा बहुपतिप्रथामा विद्रोह सुरु भएको मानिन्छ । उच्च हिमाली भेगमा रहेको ‘क्याराभान’ अर्थतन्त्रले बहुपतिप्रथा उपयुक्त रहे पनि आधुनिकतासँगै त्यो हट्नुपर्ने उनी ठान्छन् ।
त्यसैले शिक्षा र आधुनिकीकरणले युवा पुस्ताले उक्त प्रथा नरुचाए पनि पुरानो पुस्ताको दबाबका कारण हुम्लाका लामा समुदायमा अझै केही वर्षसम्म यो प्रथाको अस्तित्व रहने बहुपतिप्रथाका शोधकर्ता खेमु केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बहुपति धेरै पुरानो संस्कृति हो । जतिसुकै परसंस्कृति ग्रहण बढ्दै गए पनि जरो गाडेको प्रथा हट्न अझै केही वर्ष लाग्नसक्छ ।’ (सञ्चारिका फिचर सेवा)(जनक कान्तिपुर दैनिकका नेपालगन्ज ब्युरो प्रमुख हुन् ।)